Timisoara, ရိုမေးနီးယားကျက်သရေနှင့်အတူ ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, ရိုမေးနီးယား
အရှေ့ဥရောပ ဒါဟာကြမ္မာရဲ့ကျက်သရေပါပဲ။ ရာစုနှစ်များစွာသမိုင်းနှင့်နိုင်ငံရေးစနစ်များကအမှတ်အသားပြုခဲ့ပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်လှပသောမြို့ကြီးများရှိသည်။ ဥပမာ, ရိုမေးနီးယားရှိ Timisoara.
တီမိုဆာရာ ၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းတတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည် နှင့်ရိုမေးနီးယားအနောက်ပိုင်းအတွက်အဓိကစင်တာ။ ၎င်းကိုဘာကြောင့်ဟုလူသိများသနည်း Little ကဗီယင်နာ သို့မဟုတ် ပန်း၏မြို့တော်။..
2 Timisoara ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ထိုအမည်ကိုဟန်ဂေရီဘာသာစကားမှဆင်းသက်လာပြီးပထမဆုံးအခြေချနေထိုင်သူများသည်ရောမလူမျိုးများအထိပင်အချိန်ကတည်းကစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းသည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှချားလ်စ် ၁ တည်ဆောက်ခဲ့သောခံတပ်ပတ်လည်တွင်အလယ်ခေတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည် ခရစ်ယာန်များနှင့်နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သောအော့တိုမန်တာ့ခ်ျများအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သောစစ်ပွဲတွင်ရန် ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်အထိအော့တိုမန်လက်၌ကျန်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်၎င်းသည်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုများစွာကိုခံခဲ့ရသည်။
၁၇၁၆ တွင် Savoy မင်းသား Eugene က Timisoara ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ၂၀ ရာစုအစတွင် Habsurgs လက်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက် ဟန်ဂေရီကရိုမေးနီးယားကိုမြို့ပေးအပ်လိုက်သည်နှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင်ပျက်စီးမှုများစွာခံစားခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ဆိုဗီယက်ပတ်လမ်းအောက်မှာရောက်ခဲ့တယ်၎င်း၏လူ ဦး ရေတိုးပွားလာကြောင့်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။
မြို့တော် Banat ၏လွင်ပြင်၌ရှိ၏Timis နှင့် Bega မြစ်များခွဲခြားထားသည့်နေရာတွင်ရှိသည်။ ဒီနေရာမှာရွှံ့နွံတွေရှိတယ်၊ မြို့ဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာသင်နယ်မြေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်ကာကွယ်ရေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သော်လည်းစိုထိုင်းဆအလွန်နီးကပ်မှုက၎င်းအားပိုးမွှားများစွာသယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ၁၈ ရာစုတွင်ပြည်သူ့ရေးရာများကြောင့်မြို့သည်တိမစ်မြစ်ပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲဘီးဂါတူးမြောင်းပေါ်တွင်စတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်၊ ထို့နောက်အားလုံးတိုးတက်လာသည်။
အစဉ်အလာအားဖြင့်၎င်းသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ပညာရေး၊ ဒီနေ့က သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် tram လိုင်းခုနစ်ခု၊ trolleybus လိုင်းရှစ်ခုနှင့်ဘတ်စ်ကားလိုင်း ၂၀ ကျော်သာရှိသည်။ ဒါ့အပြင် အများပိုင်စက်ဘီးတွေရှိတယ် ဘူတာရုံ ၂၅ ခုနှင့်စက်ဘီး ၃၀၀ ကိုဒေသခံများရောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များပါအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည် ခန္ဓာကိုယ် သောရုပ်သံလိုင်းကိုသွားလာ။ အများပြည်သူ။
မြို့တော်တွင်အခြားဥရောပမြို့များကဲ့သို့ပြတိုက်များမရှိသလောက်ဖြစ်သော်လည်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမှားအယွင်းမရှိလျှင်သင်ပြတိုက်များနှင့်ပြခန်းများကိုတစ်နေကုန်လည်ပတ်စရာမလိုပါ။ ထို့ကြောင့် Timisoara ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် စိတ်ဝင်စားစရာပြတိုက်၏လက်တဆုပ်စာ:
el Timisoara အနုပညာပြတိုက် ၎င်းသည် Unirii ရင်ပြင်တွင်ရှိပြီး ၁၈ ရာစုအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း၊ ခေတ်ပြိုင်၊ အလှဆင်အနုပညာ၊ ပန်းချီကားများနှင့်ပန်းချီကားများနှင့်ဥရောပအနုပညာများယေဘုယျအားဖြင့်ပြပွဲများနှင့်အဖြစ်အပျက်များရှိပါသည်။ ၀ င်ကြေးသည် ၁၀ ဒေါ်လာကျသင့်ပြီးအင်္ဂါနေ့မှတနင်္ဂနွေနေ့မှနံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၆ နာရီအထိဖြစ်သည်။
el Banat အမျိုးသားပြတိုက် ကဒေသ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်မြို့လယ်ရှိရှေးအကျဆုံးအဆောက်အအုံရှိ Huniade Castle တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ၊ သမိုင်း၊ သဘာ ၀ သိပ္ပံနှင့်အခြားဌာနများစွာရှိသည် Traian Vuia ပြတိုက်ရိုမေးနီးယား၏နာမည်တူတီထွင်သူ၊
el ကျေးရွာပြတိုက် ၎င်းသည်အလွန်အစိမ်းရောင်inရိယာရှိတိမီနိုရာ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်တည်ရှိပြီးအမှန်တကယ်ကျေးရွာတစ်ရွာကိုကောင်းစွာရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ၎င်းတွင်အဆောက်အ ဦး များစွာ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ကြိတ်ဆုံတစ်ခုရှိသည်။ လမ်းလျှောက်ရတာကောင်းတယ်၊ တိရစ္ဆာန်ရုံနဲ့နီးတယ်၊ နေရာနှစ်ခုလုံးကိုလည်ပတ်နိုင်တယ်။ သင်ဘတ်စ်ကားဖြင့်ရောက်ရှိပြီးဝင်ပေါက်သည် ၅ RON ဖြစ်သည်။ နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီနာရီများရှိသည်။
el ကွန်မြူနစ်စားသုံးသူပြတိုက် ထုံးတမ်းစဉ်လာမဟုတ်ပါဘူး ၎င်းသည်မြို့၏ကွန်မြူနစ်ခေတ်အတိအကျကိုထင်ဟပ်စေသောရှားပါးပြတိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုရှိသောအိမ်ဟောင်းတစ်လုံးရှိ Scart Bar ၏မြေအောက်ခန်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ လှပသောအလှဆင်ထားသောဖော်ရွေသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြတိုက်၏စုဆောင်းမှုတွင်အားလုံးရှိပြီး၎င်းသည်သူငယ်ချင်းများနှင့် visitors ည့်သည်များ၏အလှူငွေဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ကွန်မြူနစ်ခေတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံး။ Szekely Laszlo 1 Arh တွင်တွေ့ပါ။
el တော်လှန်ရေး၏သတိရအောက်မေ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲခဲ့သည့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကိုသတိရပါ။ ရိုမေးနီးယားတွင်တော်လှန်ရေးသည်ဒီနေရာတွင်တိမီပိုရာတွင်စတင်ခဲ့ပြီးမြို့၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဒီ site ကိုခေတ္တယာယီသတ်မှတ်ထားသင့်ပြီးတစ်ချိန်ချိန်တွင်ပြတိုက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါအောက်မေ့ဖွယ် Calle Popa Sapca, 1989-3 ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးဝင်ပေါက်4RON ကုန်ကျသည်။ တနင်္လာနေ့မှသောကြာအထိ၊ နံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၄ နာရီအထိနှင့်စနေနေ့နံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၂ နာရီအထိဖွင့်လှစ်သည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း အနည်းငယ်ပြတိုက်ရှိပါတယ် ဒါကြောင့်အခြားလည်ပတ်မှုအမျိုးအစားများအတွက်အချိန်အများကြီးရှိသည်။ တီမီနိုရာသည်မြို့ကြီးဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး ၁၄ ရာစုမှသမိုင်းဝင်ခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင်ဖြစ်သည် လမ်းမအလယ်၌ရှောက်သွားကြလော့ ဒါဟာကျက်သရေပါပဲ
ထို့ကြောင့်၊ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သွားသည့်အခါသင်သည်အထူးသဖြင့်အချို့သောအချက်များကိုလက်လွတ်မခံသင့်ပါ။ ဆိုလိုတာက ပြည်ထောင်စုရင်ပြင်, မြို့ထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးသော။ ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် ၁၉၁၉ တွင်ရိုမေးနီးယားတပ်များဤမြို့ကိုဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်စုစည်းလာသည့်အချိန်တွင်၎င်း၏အမည်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာရှိပါတယ် Baroque လေထု ဆားဘီးယားသြသဒေါက်စ်ချာ့ချ်၊ ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း၊ ဘရုစ်အိမ်နှင့်ဘားရို့နန်းတော်တို့ဝန်းရံလျက်ရှိသည်။ အားလုံးအရမ်းလှတယ် ကဖီးတွေလည်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်နွေရာသီမှာထိုင်ရတာအရမ်းပျော်စရာကောင်းပြီးလူတွေကြည့်နေကြတယ်။ နောက်တစ်ခုကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စတုရန်းပဲ ဗစ်တိုးရီးယားစတုရန်း, အော်ပရာရင်ပြင်အဖြစ်လူသိများ။ အမည်အသစ်သည်ကွန်မြူနစ်ဝါဒပြိုလဲပြီးနောက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါစတုရန်းနှစ်ခုအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များကနံရံဖြစ်ပါတယ်: သြသဒေါက်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တောင်ဘက်ခြမ်းကနေ အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံ မြောက်ဘက်ကနေ။ ထိုအဆောက်အအုံကို ၂၀ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောအလယ်ခေတ်အဆောက်အအုံဟောင်းကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် Art-Noveau ခံစားမှုရှိပြီး၎င်းကိုရည်ရွယ်သည်။ စျေးဆိုင်, ကဖေးများနှင့်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်နှင့်အတူအပန်းဖြေ။ ခရစ္စမတ်ပွဲကိုသွားရင်ခရစ်စမတ်စျေးကွက်ရှိတယ်။
နောက်ထပ်ကြီးစွာသောစီးနင်းသည် Bega မြစ်ကမ်းနားတလျှောက်လမ်းလျှောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်စက်ဘီးဖြင့်လည်ပတ်ပါ နေသာတဲ့နေ့မှာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့မြို့ရဲ့အဆုံးကနေအဆုံးအထိသွားပြီးသူ့ရဲ့အဓိကပန်းခြံတွေကိုဖြတ်ပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီမှာ အအေးခန်းဘီယာကိုစားနိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ် နေဝင်သောအခါလည်းအလွန်လူကြိုက်များသောနေရာဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ငါကမြို့ကြီးတွေပေါ်မှာပျံသန်းရတာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒီမှာလေယာဉ်ဖြင့်သင်လုပ်နိုင်တယ်။ လေယာဉ်သည်နာရီဝက်ခန့်ဖြစ်ပြီး ၇၅ ယူရိုခန့်ကုန်ကျသည်။ ပြီးတော့နေဝင်တဲ့အခါလူတွေကိုသွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကံကောင်းတာကမြို့မှာမြို့တစ်မြို့ရှိတယ် တက်ကြွသော nightlife။ Hyper နာမည်ကြီး site တစ်ခုဖြစ်သည် D'arc, Unirii ရင်ပြင်၌။ တေးဂီတကောင်း၊ အလယ်အလတ်စျေးနှုန်း၊ နိုင်ငံခြားသားများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများနှင့်ရေပန်းစားသည်။ ကံကောင်းတာကည ၁၁ နာရီမှနံနက် ၅ နာရီအထိနောက်ကျသွားသည်။
နောက်ထပ်ညဥ့်အစက်အပြောက်ဖြစ်ပါတယ် Reflektor, အရာ 2017 ခုနှစ်, ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမဖွင့်လှစ်။ 80 ရဲ့အရက်ဆိုင် ၎င်းသည် Timisoara ရှိအရက်ဆိုင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်သောက်စားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလယ်ဗဟိုတွင်မရှိပါ၊ သို့သော်သင်သည် '၈၀' မှဖြစ်လျှင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းကိုသွားသင့်သည်။ Taine နှင့် Escape တို့သည်ပျော်စရာပျော်စရာနေရာများဖြစ်သည်။
Timisoara ကိုကြိုက်လား? ၎င်းသည်လက်လှမ်းမီနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် (ဘီယာ ၁.၂၅ ယူရို၊ နေ့လည်စာ ၁၀) ။ ၎င်းသည် Budapest နှင့် Belgrade မှ ၃ နာရီနှင့် Vienna မှ ၅ နာရီသာရှိသည်။
ဒီဟာကမြို့တော်တစ်မြို့ပါ ယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်တယ်, ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်ရုံပွဲတော်များရှိပါတယ် ကောင်းသောအစာအိမ် နှင့်လူကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြပြီး ယဉ်ကျေးမှု။ ၎င်း၏ဗိသုကာသည်လှပပြီးသမိုင်းဝင်သည်။ ညတွင်နေထိုင်သည်။ လူတို့သည်အင်္ဂလိပ်အများစုပြောကြသည်။ သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အနေဖြင့်၊ တိမင်ရာသည်ကွန်မြူနစ်ဝါဒပြိုလဲပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်စေသည့်ပထမဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » ရိုမေးနီးယား » Timisoara, ရိုမေးနီးယားကျက်သရေနှင့်အတူ